IiHolo zeGap 'Bush Lodge' Retreat - I-Airbnb
IiHolo zeGap 'Bush Lodge' Retreat
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMarina & Bishoy
UMarina & Bishoy yi-Superhost
Relax kwindawo emnandi yeholide kwindawo ezolileyo kunye neGrampians National Park njengeyadi yakho yangasemva. Ilungile njengendawo yokubaleka yothando, ikhefu lokuphumla okanye njengesiseko se-adventure, iBush Lodge Retreat ibonelela ngazo zonke izinto ezithuthuzelayo ozifunayo. Ukuhamba okumnandi, ngaphantsi kwe-2km, kuya kuba nawe entliziyweni yelali yeeHolo zeGap.
IBush Lodge Retreat ineebhedi ezi-2 zodidi oluphezulu, umqamelo, iibhedi ezilingana nokumkani. Enye yezi zinokuvulwa ukwenza iibhedi ezi-2 zomntu omnye ukuze uthuthuzeleke. Igumbi lokulala eliphezulu likwinqanaba le-Mezzanine elivulekele kwizitepsi kunye nentsalela yendlu - nceda uqaphele ukuba akukho mnyango kweli gumbi (umfanekiso 6). Igumbi lokulala lesibini lisezantsi.
Kukho igumbi lokuhlambela eline-ensuite phezulu, kwaye igumbi lokuhlambela elisezantsi liqhayisa nge-spa ephindwe kabini. Indawo yabucala ivumela abo banqwenelayo, ukuba bavule iimfama ngelixa besonwabela i-soak epholileyo. Oku kwenza iBush Lodge ilungele izibini ezi-1 okanye ezi-2.
Igumbi lokuphumla elivulekileyo linomabonakude kunye nendawo yomlilo eqaqambileyo ukukugcina ufudumele kwaye upholile. Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nebarbecue ekwidesika egqunyiweyo. Kukho umatshini wokuhlamba kunye nesomisi okhoyo ukuze ube lula kuwe. Indawo yokulala ineeyunithi ezi-2 zomjikelo we-air conditioner, enye ikumgangatho ophezulu kwindawo yokulala, kunye nenkulu ezantsi kwindawo yokuhlala, ikugcina upholile ehlotyeni naphaya xa uyifuna kunye nomlilo ebusika. IBush Lodge Retreat ibonelela ngeemfuno zakho zeholide.
Nceda uqaphele: ukuhlala kwakho kuhambelana nesilwanyana, nangona kunjalo sikucela ngobubele ukuba ugcine abahlobo bakho abanoboya kwifenitshala, kwaye nceda ucoce emva kwabo.
4.83 · Izimvo eziyi-245
Umbuki zindwendwe ngu- Marina & Bishoy